१८ बर्षेकी युवतीको रहस्यमय मृ ‘त्यु, आफ्नै मिल्ने साथीले खोलिन यस्तो ड र ‘लाग्दो र’हस्य, यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन ! - समृद्ध नेपाल
मेरी बास्सै’ टेली चलचित्रकी चम्सुरी पल्पसा डंगोललाई यो के भयो ? टिचिङ अस्पतालमा गरियो भ’र्ना
काठमाडौंमा भित्तेलेखन गर्न पाइन्न: मेयर शाक्य
निशुल्क आईपीओ भर्न सकिने यी हुन् १० बैंक, अन्य बैंकको शुल्क कति ?
नेपालमा पनि कालो ढुसीका विरामीहरु बढ्दै !
पोर्चुगलविरुद्ध बेल्जियम विजयी, टुंगियो रोनाल्डोको यात्रा !
मानव जातिकै सबैभन्दा नजिकका पुर्खा “ड्रागन म्यान”को जीवाश्मा चीनमा भेटियो
भ्वाइस अफ नेपालमा नयाँ कोच, दीप श्रेष्ठ अस्वस्थ भएपछि राजेशपायल राईले सम्हाले कार्यभार
चर्चित अभिनेत्री मनिषा कोईराला आमा बन्दै !
जसको हेलिकोप्टरमा उड्दा–उड्दै मन्त्री पद गयो !
१८ बर्षेकी युवतीको रहस्यमय मृ ‘त्यु, आफ्नै मिल्ने साथीले खोलिन यस्तो ड र ‘लाग्दो र’हस्य, यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन !
१८ बर्षेकी युवतीको रहस्यमय मृ ‘त्यु, आफ्नै मिल्ने साथीले खोलिन यस्तो ड र ‘लाग्दो र’हस्य यस्तो सम्म भनेकी रहेछिन (भिडियो सहित)दमक नगरपालिका–५ स्थित एक घरमा कोठा भा’डामा लिएर अध्ययन गर्दै आउनुभएकी इलामकी सेजला कोइरालाको बुधबार साँझ रहस्यमय मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीले मृ ‘त्युको कारणबारे अनु’सन्धान शुरु भइसकेको जनाएको छ प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले से’जलालाई बेलुकी करिब ५ः०० बजे साथीले मोबाइलमा सम्पर्क गरेका थिए ।
त्य’सक्रममा मोबाइल नउठेपछि साथी कोठामा पुग्दा उहाँलाई शौचालयको कम्बोर्टमा बेहोस अवस्थामा भेटेको र तत्कालै लाइफलाइन अस्पताल पु¥याइए पनि बचाउन नसकिएको साथीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रनाउ कार्कीले जा’न’कारी दिए ।
घ ट नालगत्तै पीडितका अभिभावक राति ११ः०० बजे दमक आइपुगेका बताइएको छ । आफन्तले भने सेजलाको मृ ‘त्यु र’ह’स्यमयी भएको भन्दै निष्पक्ष छानविन गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । घटनाको बारेमा मृत कको साथि संग गरिएको कुरा’कानी’ तल हेर्नुहोला।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सडक आन्दोलनसँग मेरो कुनै साइनो छैन !
सेनामा ‘जंगल वारफेयर’ तालिम पुरा गर्ने पहिलो महिला सैनिक बनिन् राधिका !
नेपाली नायिका बिनिता बराललाई विवाह गरेको सात महिनामा पुत्री लाभ, नाम राखिन् काया
अन्तरजातिय विवाह गरेकी बहिनीलाई फकाएर बोलाए, दाइहरुले गरे यस्तो कार्य !
खुसीको खबर : नोबल अस्पतालले कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने !
सुर्खेतमा सेनाको कन्टेनरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु !
खुसीको खबर अनलाइन नवीकरण गरिरहनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य !
फोन र ल्यापटपमा अत्यधिक समय बिताउनुहुन्छ ?
एकाबिहानै बस र ट्रक ठोक्किंदा एकको मृत्यु दुई घाइते !
तिब्बतका लुटेराहरूले गुम्बामा रहेको सयौं वर्ष पुरानो बहुमूल्य मूर्ति लुटे !
सरकारले तोक्यो पारिश्रमिक, श्रमिक भन्छन्- पुगेन !
टप १२ बाट बाहिरिन् श्रृङ्खला खतिवडा, यस्तो छ उनको मिस वल्र्ड यात्रा
कुनै पनि बहानामा असार १ गतेबाट भदौ मसान्तसम्म यस्तो कार्य गर्न नपाइने, गरेको खण्डमा कारबाही हुने !
मेलम्चीमा होटल रोजको छ्तबाट दुईजना युवाहरु उद्वारको लागि गुहार माग्दै !
© 2021 समृद्ध नेपाल - WordPress Theme : by Sparkle Themes